SIM, Fivmpama, SSM, CTM, Crem: ratsy toerana sy sahirana ny indostria malagasy | NewsMada
SIM, Fivmpama, SSM, CTM, Crem: ratsy toerana sy sahirana ny indostria malagasy
Mandalo fotoan-tsarotra ny indostria malagasy, taona maromaro izao. Tsy misy fihatsarana fa vao mainka milentika ny indostria. Betsaka ny mahatonga izany, araka ny fanazavana nomen’ireo miray hevitra ho fampiroboroboana maharitra ny indostria malagasy.
SIM, Fivmpama, SSM, CTM, Crem. Ireo no mitambatra miray hevitra ho fampiroboroboana maharitra ny indostria malagasy (Alliance pour l’industrialisation durable). Isaky ny telo volana ity fiomboanana ity, mamoaka ny tontolon’ny indostria ankapobeny eto an-toerana, ka nampahafantarina, omaly, ny andiany faharoa. Amin’ny ankapobeny, ratsy toerana, sahirana ny indostria malagasy noho ny fifaninanana tsy ara-dalàna, fampidirana entana gaboraraka avy any ivelany, tsy fahampian’ny angovo, fahazoana famatsiam-bola, fahefa-mividin’ny mpanjifa ambany dia ambany, tsy fahafaham-pon’ny mpiasa. Ireo no tena nasongadina, tsy zava-baovao loatra fa vao mainka mitohy izany. “Tsy mandray andraikitra ny fanjakana”, hoy izy ireo.
Mitaky vahaolana haingana sy ao anatin’ny fotoana fohy ny Alliance. Karazana hafatra ampitaina sahady amin’izay ho mpitondra manaraka eo. Angatahan’izy ireo ho matotra ny fiaraha-midinika amin’ny fanjakana. Tolokevitra naroso ny hampitambarana ny minisiteran’ny varotra, asa tanana sy indostria ho iray. “Lany fotoana fotsiny izahay mitety ireo minisitera telo nefa asa mifampiankina ny sehatra sahanin’izy ireo”, hoy Rakotodrasanjy Rivo, filoha lefitry ny “Alliance”. Zava-dehibe iray nangatahan’ireo mpandraharaha ireo ny fananganana Tahiry ho an’ny indostria eto an-toerana sy banky apetraky ny fanjakana.
Ambany ny fahefa-mividy
Momba ny mpiasa manokana, satria misy solontenan’izy ireo (SSM sy CTM), efa hatramin’ny ela nilaza ny olana momba ny karama, misy fiantraikany any amin’ny fahefa-mividin’ny vahoaka, tokony hampandeha ny indostria. Miampy ny fahalafosan’ny sara-pitaterana, tsy fisian’ny fandriampahalemana, indrindra ny fahanteran’ny fotodrafitrasa na tsy misy mihitsy any amin’ny faritra maro. Inona ny indostria azo antenaina amin’izany ?
“Zara raha nasian-teny ny fampandrosoana ny indostria nandritra ny fampielezan-kevitra teo iny. Koa manery ny fanjakana izahay hijery izany akaiky, hiara-hidinika aminay fa tsy hijery ny tombontsoan’ny mpitondra fotsiny sy izay nanohana azy nandritra iny fampielezan-kevitra iny”, hoy ny mpandraharaha iray. Tsara ho fantatra anefa fa ireo 80 mpikambana ao amin’ny Sim, mampiditra hetra 25 % ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana.
“Betsaka ny miaro ny azy aty Afrika”
“Tsy tokony hiandry fanjakana ianareo na haneho hevitra fotsiny. Iaraha-mahalala fa ao anatin’ny fanatontoloana isika izao ka tsy mora ny miady amin’ireo efa matanjaka”, hoy ny mpanatrika iray. “ Na izany aza, betsaka ny firenena miaro ny azy aty Afrika. Tsy manaiky ny fampidirana entana fahatany avy any ivelany ireny ; tokony hahodina eto an-toerana ny akora fototra fa ho an’izay manondrana izany, tataovana hetra ambony …”, hoy ny filohan’ny Sim, Rajaonera Fredy.